April 22, 2014 – Vanoda Zvinhu
ndakaka bvutira watch kamusikana kepanext yakainge katengerwa nemukomana wake.takamhanyisana kusvika mumba mangu.ko ndoraiva basa rekutamba chikudo tapedza form six muna 2004.ndakatanga kuiwandisa ndichitenderedza maoko kachitraya kuibvuta.ipapo akabva atora cap kwakutanga kuti ndokupa wandipa watch.ndaktanga kuda kuibvuta iye achichinjanisa maoko.ndikati mukana ndiwo uno. ndaiita ndichinhafa tuzamu twaive tweakamira ndichisvitsa maoko pagaro.ndakazombundira
Ndakabatwa nenyere ndokutanga kufunga kurikita beche kwaiitwa naChampion boyfriend yangu .Champion aisvira zvekuti unombopedza mazuva usingadi mboro. Beche rangu rakabva ratota ndakatonzwa nepant kuti zvinhu zvanga zvashata. Ndakatora phone yangu ndokufonerawo vamwe amuponesi vaimbopisa zvinhu kana Champion aenda kunohodha kuSouth. Vakabva vanditi he was out nebasa . Then I tried
Iyo nyaya yekuchengera vana kunge uchazovasviira wega iyi. Pane rimwe zidhara ratinotamba naro snooker kubhawa riri very strict nevanasikana varo zvekuti kana kunotenga chingwa haridi kuti vaende. Zvino one day during discussions tiri mubhawa hedu rakataura nyaya yekuti rakange richitadza kuinstalla mainternet settings computer yekumba. Ndakati mdara zvishoma izvo. I
Categories : Dzesviro nhauLeave a comment
1) Usatya kukumbira mwanasikana kuti ambotanga aidya. Ngaarege kuita zvehasha nekuti angakukuvadza. Zvinyoronyoro ika nhai vasikana. 2.)Paanenge achikukwekweta kudaro haikona kufunga zvirikuitika ipapo, itofunga hako zvimwewo zvinhu eg. mhamba, bhora, kana kuti mota tsva yaungada kuchaira. 3)Kana achinge apedza kusvisvina haikona kubva wangoiti makare dhovho, kana ari mudiwa wako ibva waenda panext step,